अन्जनको स्थानमा कसले खेल्छ? | Hamro Khelkud
अन्जनको स्थानमा कसले खेल्छ?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी यू२३ च्याम्पियनसिपको छनोट चरण अन्तर्गत नेपालले बुधबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा लेबनानको सामना गर्दैछ। दुवै खेलमा पराजित टोलीहरुको खेलमा नेपालका लागि फरवार्ड अन्जन बिष्ट दोहोरो पहेंलो कार्डका कारण उपस्थित हुने छैनन्।
नेपालका लागि पछिल्ला दुवै खेलमा अन्जनले पुरै समय मैदानमा बिताएका थिए। नेपालले गोल गर्न नसकेपनि अन्जनले आक्रमणमा केहि मौका सिर्जना गर्नेदेखि खेलमा कडा मेहेनत गरेको प्रष्ट झल्कन्थ्यो। उनको अनुपस्थितिसँगै अन्तिम खेलमा कप्तान विमलसँग आक्रमणमा को उत्रिन्छ भन्ने कौतुहलताको विषय बनेको छ।
पछिल्लो खेलमा प्रशिक्षक शाक्यले खेलको ७५औं विमल घर्ती मगरको स्थानमा सन्जोग राइलाई मैदान प्रवेश गराएका थिए। सन्जोगले ठुलो अवसर केहि नपाएपनि उनले केहि राम्रो मुभमा सामेल भएका थिए। सन्जोगसँगै सुनिल बल पनि उज्वेकिस्तानविरुद्धको खेलमा केहि छरिता देखिएका थिए। पहिलो खेलमा आशातित प्रदर्शन गर्न नसकेपछि दोश्रो खेलमा उनि सुरुवाती रोजाईमा परेका थिएनन्। तर, ३३औं मिनेटमा पुजन उपरकोटीलाई स्थानान्तरण गर्दै मैदान प्रवेश गरेका उनले औसत प्रदर्शन गरे।
प्रशिक्षक शाक्यले लेबनानविरुद्धको खेलमा सुनिल वा सन्जोग मध्य कुनै एक खेलाडीलाई अन्जनको स्थानमा उतार्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ।